ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ Poly သင်္ဘောအိတ်များ မှအရည်အသွေးမြင့် Poly သင်္ဘောအိတ်များ ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
PP နှင့် PE ယက်ထည်များသည်စျေးသိပ်မကြီးသော၊ ကြာရှည်ခံသောပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးထုပ်ပိုးခြင်းအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်သည်။
Summer Show Plastic Corporation ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့အရည်အသွေးမြင့် PP / PE ယက်ထည်ထုတ်လုပ်ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းထုတ်လုပ်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည် Poly သင်္ဘောအိတ်များPP ရက်လုပ်ထည်၊ တာပေါ်လင်၊
ဒီယက်ထည်၏အရွယ်အစား, အလေးချိန်, အရောင်နှင့်ပုံနှိပ်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
ထုပ်ပိုး application များအတွက်သင့်လျော်သည်။ ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော PP / PE ယက်ထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည် Taiwan.
ပုံစံ - DP-SERIES-01
ပစ္စည်း:PE/PP အမြှေးပါးတန်း PE နှင့်အတူထည်ယက်/PP laminating ရုပ်ရှင်
ခရမ်းလွန်ကာကွယ်မှု:3years မှ 200 နာရီ,လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်
ပေးပို့ခဲအချိန်:ပထမ ဦး ဆုံးကွန်တိန်နာ 30-အမိန့်အတည်ပြုချက်အပေါ်သို့ 60days
ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောတာရှည်ခံ PP ထုတ်လုပ်ရန်အထူးပြု/PE အိတ်များ.မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများနှင့် PP ၏ပံ့ပိုးမှုများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်သင့်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ကြားရသောကြောင့် ၀ မ်းသာပါသည်/PE ထုတ်ကုန်များနှင့်ပစ္စည်းများ.ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီပစ္စည်းများ၏သတ်မှတ်ချက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.wovensack.com.tw/my/poly-shipping-bags.html
Poly Shopping Bag များ
အကောင်းဆုံး Poly သင်္ဘောအိတ်များ ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက်သင်သည် Poly သင်္ဘောအိတ်များ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ၊ OEM နှင့် ODM ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ခုမှ